RASMI: Man City oo ku dhawaaqday bixitaanka Aguero & in taalo looga dhisayo garoonka Etihad – Gool FM
(Manchester) 29 Maarso 2021. Manchester City ayaa si rasmi ah u shaacisay in xiddigooda reer Argantina ee Sergio Aguero uu ka tagayo safka Kooxda dhamaadka xilli ciyaareedka haatan socda.
Qandaraaska Sergio Aguero ee kooxda Manchester City ayaa dhacaya dhamaadka xiliciyaareed kaan, halka kooxda ay u sheegtay inaysan doonaynin inay qandaraaska u cusbooneysiiso, sida ay qortay BBC-da.
Xiddiga reer Argentina ayaa ka qayb qaatay 384 kulan uu u ciyaaray kooxda Man City tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda reer Spain ee Atletico Madrid sanadkii 2011, wuxuuna inta lagu gudi jiray mudadan ku dhaliyay 257 gool.
Markii lagu dhawaaqay bixitaanka Aguero, kooxda reer England sidoo kale waxay ku dhawaaqday inay ugu dhisayso taalo isaga iyo labada halyeey kale ee kooxda Vincent Kompany iyo David Silva garoonka Etihad, iyadoo lagu sharfayo dadaalkooda kooxda.
Aguero wuxuu ka qayb qaatay kor u qaadista Manchester City inay noqoto meesha ugu sareysa kubadda cagta Ingariiska sanadihii la soo dhaafay, maadaama uu ku hoggaamiyay inay ku guuleysato saddex jeer horyaalka Premier League ah, tartanka FA Cup, iyo sidoo kale 5 jeer oo Carabao Cup ah.
Dhinaca kale guddoomiyaha Manchester City ee Khaldoon Al Mubarak ayaa ammaanay waxa uu laacibka soo bandhigay intii uu ku guda jiray xirfadiisa kooxda, wuxuuna yiri:
“Waxqabadkii Sergio uu ka sameeyay Manchester City 10-kii sano ee la soo dhaafay lama xisaabin karo.”
“Waa halyeey ku sii jiri doona xusuusta dhamaan taageerayaasha kooxda iyo xitaa kuwa iyagu Si fudud u jecel kubadda cagta.”
Muxuu Sergio Aguero ka yiri kaddib markii ay Man City si rasmi ah ugu dhawaaqday inuu ka tagayo kooxda?